Shiinaha 140cm silikoon nin doll nolol nafaqo leh cabir nololeedka dadka waaweyn ee jinsiga u ah khaniisiinta yar yar ee silicone labka ah ee loogu talagalay haweenka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Shaoman
ai robot caruusad jinsi
SOO nuugista gariirka
boodbooda ukunta jacaylka
140cm silikon nin doll nolol nololeedkeedu le'eg yahay cabbirka galmada ee dadka waaweyn ee loogu talagalay khaniisiinta wiilka silicone ee caruusadda galmada ee Haweenka
Dhererka 140cm Sinta 79cm Guska 16-18cm
Luqunta 22cm Gacan 58cm Qoto dheer futada 14cm
Garabka 32cm Timir 17cm Miisaanka saafiga ah 30.5kg
Naaska sare 73cm Lug 74cm Qoto dheer afka 12cm
Naaska hoose 67cm Cagta 21cm Dhexda 61cm
Sharaxaad ku saabsan caruusadeena jinsi ee dhererkeedu yahay 140cm:
Biyo-la’aan, si sahlan loo nadiifiyo, saabuun ku nadiifi kahor intaadan isticmaalin.
3D tunnelka gudaha, aad u dhab ah.
Maqaarka jilicsan: Waxyaabaha TPE ee caafimaadka oo tayo sare leh.
Boombaaladeenna waxaa loogu talagalay saami ahaan iyo isu ekaysiinta jidhka bini'aadamka, waxay umuuqdaan kuwo aad u baddan.
1. Kahor isticmaal, waxaad ku dhejin kartaa usha kuleylka marka hore kuleylka, haddii ay dhacdo kuleyl, Ha ka badin 25 daqiiqo.
2.Si aad u isticmaasho saliida biyaha ku saleysan iyo cinjirka galmada markii aad jeclaato caruusadda.
3.Hubi in dharkeedu yahay midab adkeysanaya bedelida midabka, ama ay adkaaneyso in la nadiifiyo.
4-Ha u dhigin caruusaddaada qorraxda muddo dheer si looga hortago gabowga maaddada.
5. Jirka si joogto ah ugu nadiifi saabuun yar oo ka hortagaysa bakteeriyada iyo biyo diirran.
6.Towlo qalaji boombaladaada iskana ilaali inaad isticmaasho timo qalajiyaha maadama kuwani waxyeello u geysan karaan.
7. Ka taxaddar marka aad dhaqaajineysid caruusadda, iska ilaali inaad hoos u dhacdo / garaacdo / jebiso.
8.Boygaaga jacaylka jacaylka ah looma oggola inuu yeesho isbeddel buuxa oo dhinacyo kala duwan ah.
9. Ha uga tegin isla booskaas waqti aad u dheer, xitaa ha uga tagin iyada oo jiifa meel adag muddo dheer.
10.Waxaa jira qalfoof bir ah oo la dhisay, taas oo ka dhigaysa iyada mid aad u jajaban, laakiin waxaan kuu soo jeedinaynaa inaadan sameynin isku dheelitirnaan aad u adag, waxay waxyeello u tahay maqaarka caruusadda iyo qalfoofka
11. Markii aan la adeegsan, ku keydi caruusadahaan silikoon santuuqa uu ka soo galay gudaha waana in lagu dhejiyaa meel jiif ah iyadoo dhammaan kala-goysyada ay toosan yihiin oo ay nasanayaan. Ka fogow xaaladaha xad dhaafka ah ee qabow iyo keydinta xaaladaha kulul.
Hore: 180cm china wiil jinsi jinsi jinsi jinsi jinsi qaangaar jinsi dolls dolls doll dolls dolls dolls dolls for women
Xiga: 172cm Dufan Jinsi Doollar Silicone Jabbaan Jacayl Jaceyl ah oo leh H koob naasaha waaweyn dameer dameer dhab jacayl jinsi jinsi ragga
Debecsan Silicone Jacayl macquul ah Ragga Ragga Qaangaarka ah ...
180cm nin jinsi jinsi jinsi jinsi jinsi jinsi qaangaarka ah galmada galmada ...
Cinwaanka:No. 10 West Yihong Road, Xinhua Area, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha